Maalinta: Oktoobar 19, 2019
Tareenka buluugga ee Konya wuxuu u shaqeeyaa inta u dhaxeysa Konya iyo Izmir (Basmane). Tareenka buluugga ee Konya Blue waa mid ka mid ah tareennada safka ugu weyn Waxaad ka heli kartaa jidka, jadwalka, astaamaha tareenka iyo qiimaha tikidhada halkan. konya- [More ...]
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada (DHMİ) iyo Gudoomiyaha Gudiga Agaasinka Hüseyin Keskin ayaa indha indheyn ku sameeyay akoonada warbaahinta bulshada ee ku saabsan booqashada. Keskin, “Xarunteena, istiraatiijiyadeed [More ...]
Wax ka badalida Shaqaalaha ee TÜLOMSAŞ ee ku saabsan Gudbinta iyo Beddelka Cinwaanka. Turkey tareenka iyo Engine Industry Xarunta Corporation Shaqaalaha Regulation on Gudbinta iyo Change of Title Amendment of Regulation ah. [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, wasiirkii hore ee Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga Taner Yıldız oo ay wehliyaan Madaxweynaha xafladda furitaanka ballaaran ee Madaxweynaha Derevenk Viaduct iyo [More ...]
Isbitaalka gobolka ee xaafada Orhan ee degmada Kandira waxaa lagusoo marayaa wadada Kabaagac wadada weyn ee ku taal bartamaha magaalada. Wadada adag ee Wadada Kabaağaç awgeed, bukaanada waxaa loo qaaday ambalaaska Gobolka Kandira State. [More ...]
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu Bolu Dowlada Hoose, Melen Dam iyo Dowlada hoose ee isgaarsiinta Izmit-ka kahor booqashooyinka degmooyinka Sapanca waxay la kulmeen muwaadiniin iska ilaaliya khadka fiilada. İmamoğlu wuxuu dhageystay dalabka muwaadiniinta, [More ...]
Jawaabta Labaad ee Imamoglu ee Xarunta Xannaanada: 'Aad baan uga xanaaqsanahay anigoo ku hadlaya magaca Istanbul!'
Madaxweynaha remBB Ekrem İmamoğlu ayaa khudbadii xiritaanka ka jeediyey “Mudaaharaadka Mukhtars ee düzenlen lagu qabtay Eurasian Show iyo Art Center ee Yenikapı wuxuuna isu keenay madaxa 961 ee magaalada. Waxaa laga keenay gundhigga xarumaha Haydarpaşa iyo Sirkeci [More ...]
Imtixaankan oo laga joojiyay Haydarpasa Sirkeci Railway Station Tender
IMM waa laga saaray qandaraaska Haydarpaşa - Saldhigga tareenka ee Sirkeci. İmamoğlu; “Fikradda caqliga lihi waa mid qosol leh. Baabi'inta waa sharci darro. Arrinta ayaan u gudbinaynaa maxkamada waxaanan sameyn doonaa cabasho dambiyeed. ” Qandaraaska waxaa laga rafcaan doonaa Isniinta. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
Shil tareen oo ka dhacay Izmir! .. Gawaarida tareenka xamuulka qaada waa la tuuray
Shilka tareenka ee İzmir! .. Laga bilaabo Alsancak Port, tareenka xNUMX gaari xamuul ah, ayaa laga saaray Şehitler Street sabab aan la go'aamin. Wax dhaawac ah oo aan la soo sheegin oo carqalad ku ah dhacdada ayaa la soo sheegay. Wareejinta Izmir [More ...]
KARDEMİR Wuxuu Bilaabey Maalgalin cusub Askariga Salaan
10 Kardemir 2, kaas oo la joojiyay bishii Juun. Geedka cusub ee loo yaqaan 'Lime Plant' ayaa dib loo abaabushay iyada oo xaflad loo qabtay maanta ka dib markii la kordhiyay awoodda maalmeedka 124 iyo maalgashiga cusboonaysiinta casriyeynta. Xafladaha [More ...]
Maanta taariikhda: 19 Oktoobar 1898 Dakhliga Railways ee Baghdad Date
Maanta taariikhda 19 Oktoobar 1898 Baghdad Railways ayaa la siiyay mar labaad Deutche Bank.